Asomafo 21 NA-TWI - Paulo kɔ Yerusalem - Yɛne Efeso asafo - Bible Gateway
Asomafo 20Asomafo 22
Asomafo 21 Nkwa Asem (NA-TWI)
21 Yɛne Efeso asafo mpanyimfo no dii ntetewmu no, yesiim nam nsu ani tee kɔɔ Ko. Ade kyee no, yekoduu Rodo na yefii hɔ kɔɔ Patara. 2 Yenyaa hyɛn bi a ɛrekɔ Foinike kɔtenaa mu kɔe. 3 Yeduu baabi a yɛn ani tua Kipro no, yetwaa ho wɔ benkum fam kɔɔ Siria. Yesii fam wɔ Tiro, efisɛ, na ɛhɔ na wɔrekoyi hyɛn no mu nneɛma. 4 Yehuu asuafo bi wɔ hɔ tenaa wɔn nkyɛn dii nnawɔtwe. Asuafo no nam Honhom Kronkron adiyi so bɔɔ Paulo kɔkɔ se ɔnnkɔ Yerusalem. 5 Nanso bere dui sɛ ɛsɛ sɛ yefi hɔ no, yegyaw wɔn hɔ kɔe. Asuafo no nyinaa ne wɔn yerenom ne wɔn mma kogyaa yɛn kwan koduu mpoano. Yeduu hɔ no, yɛn nyinaa buu nkotodwe bɔɔ mpae. 6 Afei yɛkrakraa yɛn ho yɛn ho wiei no, yɛkɔtenaa hyɛn no mu maa wɔn nso san kɔɔ fie.